Ezona webhusayithi zibalaseleyo zokufumana yonke into simahla-Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi
Ukubukela uthotho okanye iimuvi ezikwi-Intanethi zizinto eziqhelekileyo. Nangona kuziwa ekujongeni le mxholo kwi-Intanethi sineendlela ezininzi zokwenza. Kuba sinamaqonga amaninzi okusasaza afumanekayo koku, esinokubukela kuthotho lwethu oluthandayo okanye iimovie ngokulula. Sinokusebenzisa iphepha lokukhuphela simahla okanye simahla.
Ke nokuba ufuna iindaba malunga nobugqwetha kunye namaphepha athandwa kakhulu ukukhuphela kunye nokubukela umxholo wasimahla, okanye iindaba zamva nje malunga neqonga lokusasaza kwiimarike, ungaphoswa leli candelo kwiiBlusens.
Kuyo uya kuba nakho ukuhlala unolwazi ngezi ndaba malunga nobugqwetha kunye nokusasaza, ukuze ungaphoswa nayiphina into eyenzekayo kweli candelo kwintengiso. Apha unokufunda iindaba zamva malunga nolu didi:
IPirate Bay iyasebenza kwakhona kwidomeyini yayo
IPirate Bay ngokungathandabuzekiyo ibe yindawo ekubhekiswa kuyo kwiwebhusayithi iminyaka kuzo zonke iintlobo zokukhutshelwa, ...
Umkhankaso omtsha wobuqhetseba ngeSMS ozenza i-Amazon
Ngaphezulu nje konyaka, onke amaphepha ewebhu afuna ukubekwa kwi-injini yokukhangela ...
Uyibukela njani inkunzi yenkomo kwi-intanethi simahla
por U-Eder Esteban yenzayo 3 iminyaka .
Ukulwa inkunzi yenkomo kuyaqhubeka nokuba nokulandela okukhulu kwamanye amazwe. Nangona ubukho bakhe kumabonwakude bunciphile ukusuka ...
Ungayibukela njani iNqindi kwi-Intanethi
Umdlalo wamanqindi ngumdlalo onezigidi zabalandeli kwihlabathi liphela. Nangona kungaqhelekanga ukuba kubekho ...
Uyibukela njani i-UFC kwi-intanethi simahla
UFC (Ultimate Fighting Championship) uye waba ngomnye wemidlalo ethandwa kakhulu kule minyaka idlulileyo. Izigidi…
Uyibukela njani i-tennis simahla kwi-Intanethi
Itenisi ngumdlalo onomdla kwizigidi zabasebenzisi. Amaxesha ngamaxesha, kunokwenzeka ukubukela ezinye iitumente ...
Yintoni iDeezloader kwaye yenzelwe ntoni
Abanye benu mhlawumbi bayalazi igama elithi Deezloader. Nangona uninzi kunokwenzeka ukuba uninzi ...
Enye indlela eya kwi-Plusdede yokubukela iimovie kunye noluhlu emva kokuvala
por UMiguel Hernandez yenzayo 3 iminyaka .
I-Plusdede ibhengeze ukuvalwa kwayo, eyayikade iyindlela eya kwiPordede, iwebhusayithi eyabelwe ukwabelana ...
Isikhokelo esiqinisekileyo sokubukela yonke ibhola kulo nyaka eSpain
Ibhola ekhatywayo iye yaba liGrail eNgcwele yeenkampani ezininzi ezibonelela ngomxholo wokumanyelwayo eSpain, ngaphandle ...
I-Playz ivula usetyenziso lwayo olutsha ukujonga yonke imixholo yayo yoqobo
I-Playz yindawo entsha yomxholo wedijithali ye-RTVE apho sifumana ukhetho olubanzi lwe ...
Bamangalela i-Nike yamazwe ngamazwe ngokusebenzisa isoftware
Apha akukho mntu usindisiweyo. Ukuthi babambe ilizwe-jikelele elitshutshisa ubuxoki beemveliso zalo kwihlabathi liphela, ...
Jonga i-TDT kwi-Intanethi
Bukela ibhola ekhatywayo kwi-intanethi simahla
Iindawo ezilungileyo zokubukela imovie kwi-Intanethi simahla